Sony MDR-AS400EX Earphones | Buy online | SHOP.COM.MM
Sony MDR-AS400EX Earphones
9mm driver unit provides comfort fit
Sony နားကြပ်မလို့ထင်တယ်။ အသံကောင်းတယ် ၀ါးလည်းမ၀ါးဘူး။ အသံကြည်တယ်။ မနက်ဆိုအပြေးလေ့ကျင့်ရင်း နားထောင်နေကြ။ ချွေးထွက်လာလို့လည်း အသံထိခိုက်တာမျိုးမရှိဘူး Read more Hide
Adjustable ear loop that fitsawide range of ear sizes.
Don’t stopaworkout when your phone rings. Witharemote control and built-in microphone1, you can take calls and switch tracks without reaching into your pocket.
Specifications of MDR-AS400EX Earphones